ကောလိပ်ညတွင်းချင်းလည်ပတ်သူများ: အဘယ်ကြောင့်တစ်ခုမှာလုပ်ပါရန်, မျှော်လင့်ဖို့ဘာ
by မာဂရက် Barthel
တစ်ခုကညအိပ်သည့်ရတဲ့အရာတွေဘရိုရှာခြင်းနှင့်ဖှယျကြွေးကြော်သံများနောက်ကွယ်မှပုန်းအောင်းစစ်မှန်တဲ့ကောလိပ်ယဉ်ကျေးမှုမပျော်သည်သင်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ကူညီမှုအတွက်အရေးပါတဲ့ tool ကိုဖွင့် စုံလင်ကောလိပ်ကိုရွေးချယ်ပါ ။ သငျသညျအသိုက်စွန့်ခွာခြင်းနှင့်ကောလိပ်အတွက်တညဉ့်ကိုလွန်စေသင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာပါပဲ။
သောသူတို့သည်စစ်မှန်သောဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုမယ့်: ကကောလိပ်ထိုသူတို့အဘို့ရုံကြီးအထိုက်မတန်ကြောင်းဖွယ်ရှိရဲ့, ဒီတော့သူတို့ဆှေးနှေးဖို့အများကြီးအားနည်းချက်တွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ သငျသညျ (ကလျှောက်လွှာကိုပေးပို့ဖို့သို့မဟုတ်သင့်ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအတွက်ပို့ပေးရန်င်ရှိမရှိ) သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမတိုင်မီဒါပေမယ့်ကကျောင်းတစ်ဦးထက်ပိုမျှတတဲ့သဘောတရားရှိသည်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆပါပဲ။
သငျသညျတခုနေ့ချင်းညချင်းအလည်အပတ်ခရီးကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သင်တို့အဘို့ကံကောင်း, သင်သည်သင်၏အိမ်ရှင်ရဲ့သူငယ်ချင်းအခန်းဖော်နှင့် floormates တွေ့ဆုံရန်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကောလိပ်အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းပြောနေတာမှကြွလာသောအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်စူပါစိတ်အားထက်သန် cheerleader တအမျိုးအစားများဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါကအဆင့်လက်ခံရေးသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ဘယ်သို့သောအကြောင်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ကောလိပ်ကျောင်းအတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုမကြိုက်ဘူး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်သောလက်ရှိကျောင်းသားများကိုမေးရန်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကကြားရက်ညများအပေါ်လိုပဲ Is အဘယ်အရာကိုကျောင်းပရဝုဏ်ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ် 2.
သင်လက်ရှိကျောင်းသားများကိုရှိအလုပ်-ဘဝချိန်ခွင်လျှာဘယ်လိုမှန်းကိုကူညီလိမ့်မည်ဟုမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေရလိမ့်မယ်။ "လူများအတူတူထွက်ဆွဲထားပါသလား?" "သူတို့မှာအားလုံးအပြင်းအထန်သို့မဟုတ်နှင့်အနောက်တိုင်းသို့မဟုတ်မလေ့လာနေပါသလား?" "ဖြစ်ရပ်များကဘယ်လိုအမျိုးအစား (စပီကာ, ဖျော်ဖြေပွဲ, ပြ, ကလပ်အစည်းအဝေးများ) ကြားရက်ညများပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်?" သငျသညျလညျးသငျကြားရက်ညများအပေါ်လေ့လာလေ့မရှိဘူးမည်မျှနာရီ "ဆိုလိုသည်မှာလက်ရှိကျောင်းသားများကိုအလုပ်လုပ်-ဘဝမေးခွန်းများမေးရန်ညအိပ်ခရီးစဉ်ကိုအပေါ်အကောင်းတစ်ဦးခွင့်ရမည်လော?
တနင်္ဂနွေ? "ပါသညျအပေါ်, အလုပ်၏အရေအတွက်ကတော့စာသင်အတွက်အချို့သောအချိန်များတွင်တိုးမြှင့်ဖို့လေ့ပေမယ့်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်စာကြည့်တိုက်စာအုပ်ကြီးမားတဲ့ stack နောက်ကွယ်မှမှတက်ကြည့်ရှုကြပြီးမည်သည့်ပျော်စရာရှိသည်ဘယ်တော့မှတစ် frazzled သေံ၌သင်တို့ကိုပြောပြလျှင်နေဆဲပြောနေတော်တော်လေးင် ။
3. သင်ဟာတခါတရံမှာသင့် Host ကအတူ Classes ရဲ့ကိုသွားပါလိမ့်မယ်
သငျသညျတခုနေ့ချင်းညချင်းအလည်အပတ်ခရီးလုပ်နေစရာမလိုဘဲအများဆုံးကောလိပ်ကျောင်းအပေါ်အတန်းတက်ရောက်ရန်နိုင်ပေမယ့်သင်တစ်ဦးနေ့ချင်းညချင်းအလည်အပတ်ခရီးကျင့်ကိုကျင့်လျှင်သင်ထွက်ရှိ violets ကျုံ့အလုံးစုံတို့အဘို့, သငျသညျလူတနျးစားရန်သင့်အိမ်ရှင်သို့မဟုတ်သင့်အိမ်ရှင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူလိုက်ပါဖို့အခွင့်အလမ်းများ (သို့မဟုတ်သင်အထဲကဒဏ်ခတ်နိုင်ပါတယ် သင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်, သင်တန်း) ။
1 အခွင့်အရေး: သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသွားကြဖို့အတန်းရွေးချယ်ရာတွင်နေအခါ, သင်ကောလိပ်ကျောင်းဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အကောင်းဆုံးကိုကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အိမ်ရှင်နှင့်အခြားသူများကိုသူတို့အကြိုက်ဆုံးပါမောက္ခသို့မဟုတ်သင်တန်းများတွင်ချိန်မှရနိုင်တယ်။
အခွင့်အရေး 2: သင်လက်ရှိကျောင်းသားတွေနဲ့အတူထိုင်လျက်နေတဲ့အခါသင်လုံးဝပျောက်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့သင်သည်သူတို့၏လူတန်းစားပစ္စည်းများပြသနိုင်ပြီး, ကအားလုံးကိုပြုသောအမှုဖွင့်သည့်အခါသူတို့ကတခြားပါမောက္ခမှနှိုင်းယှဉ်ပါက, သူတို့သင်ပါမောက္ခတစ်ဦးရိုးရိုးသားသားအမြင်ကိုပေးနိုင်ပါသည် 'ဌာနများတွင်ရှိခဲ့ပါ။
3 ယူကာ: သင်တစ်ဦးသည်လက်ရှိကျောင်းသားရဲ့တောင်ပံအောက်မှာရောက်နေသည့်အခါသင်ရုံနည်းနည်းပိုတရားဝင်ခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ (ကိုသတိပြုပါ ကောလိပ်ပညာရှင်တွေမြင့်မားသော schoo ထံမှအလွန်ကွဲပြားခြားနားကြသည် ဌ) ။
ကောလိပ်များသူတို့ကျောင်းဝင်းမှဧည့်သည်များကသူတို့ထမင်းစားခန်းခန်းမထဲမှာစားရန်ခွင့်ပြုဖြစ်စေမအပေါ်ခြားနားသည်။ တစ်ညအိပ်ခရီးစဉ်ကိုလုပ်နေတာဖြင့်, သင်သည်လက်ရှိကျောင်းသားများကို စား. , ပင်ပိုကောင်း, သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူစားပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုစားရန်အာမခံချက်နေကြသည်။ အတန်းတစ်ရှည်လျားသောနေ့ကအပြီးညစာလက်ရှိအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျောင်းသားများ, နှင့်သင်သည်သင်၏အိမ်ရှင်ရဲ့သူငယ်ချင်းမေးခွန်းတွေအများကြီးနှင့်စာရေးမေးမြန်းဖို့အတှကျအများကြီးကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
5. သင်ကညများအတွက်အိပ်ဆောင်အတွက် Live လိမ့်မယ်
အများစုမှာကျောင်းဝင်းခရီးစဉ်တစ်အိပ်ဆောင်အခန်းတစ်ဦးအလည်အပတ်ပါဝင်သည်ပြုပါ, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အဆင့်လက်ခံရေး sneaky ဖြစ်ပြီးသင်တန်း၏စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအလှဆင်နေတဲ့အထူးသဖြင့်ကျယ်ဝန်းသစ်ကိုအိပ်ဆောင်, မှခရီးစဉ်ပေးပို့သည်။ နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းမှာအိမ်ရာအခြေအနေအကြောင်းသင့်ရဲ့အိမ်ရှင်နဲ့သူသို့မဟုတ်သူမ၏မိတ်ဆွေများကမေးရန် - an နေ့ချင်းညချင်းအလည်အပတ်ခရီးပုံမှန်အိပ်ဆောင်အတွင်းလူနေမှုကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘယ်အရာကိုမြင်မှအကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာလူတွေအတူတူကြမ်းပြင် interactive နေထိုင်ပုံကိုစောငျ့ရှောကျဖို့လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှာပြုံးနှင့်ခန်းမထဲမှာ chat ပါသလား သို့မဟုတ်ပါကအိပ်ဆောင်အိပ်ရုံနေရာတစ်နေရာဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သနည်း နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သင်ထားတဲ့ပိုနှစ်သက်ပါသလဲ
အမှုအရာအများကြီးထိုကဲ့သို့သောကလပ်အစည်းအဝေးများ, ပို့ချချက်, ဖျော်ဖြေပွဲ, အနုပညာအဖွင့်, intramural အားကစား, စွမ်းဆောင်ရည်ခြစ်ခြစ်အဖြစ်ကြားရက်ညများပေါ်တွင်ကောလိပ်ကျောင်းအပေါ်ဖြစ်ပျက်။ သင်သည်သင်၏အိမ်ရှင်နှင့်အတူနေတဲ့အခါ, အမှုအရာကြောင့်ညနေပိုင်းတွင်သွားကြသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်းမေးခွန်းများမေးခြင်း, ဘာမှသင့်ရဲ့ဖန်စီရိုက်လျှင်သင်သွားကြဖို့စီစဉ်နိုင်လျှင်, ကြည့်ရှုပါ။ သင့်ရဲ့အိမ်ရှင်များသောအားဖြင့်အစဉ်အဆက်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်ပါဘူးသို့မဟုတ်သင်တကယ်မြင်ချင်စွမ်းဆောင်ရည်မသွားနိုင်လျှင်ပင်, သူတို့ကများသောအားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်မယ့်သို့မဟုတ်အခမဲ့ဖွင့်သောသူသည်အဘယ်သူသည်မိမိတို့၏မိတ်ဆွေတဦးတည်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်သင်အားဖြင့်သွားနိုင်ပါတယ် ။ တနည်း, သင့်အိမ်ရှင်သူသို့မဟုတ်သူမတက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်အစည်းအဝေး / စွမ်းဆောင်ရည် / ဟောပြောပွဲရှိစေခြင်းငှါ, သင်ကလက်ဖက်ရည်သင့်ရဲ့ခွက်ကိုဖွင့်သေချာမနေလျှင်ပင်, ကတလျှောက်တွင် tag ဖို့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးမယ့် - အရာတစ်ခုခုသင်အံ့သြသွားပေလိမ့်မည်။
သငျသညျဝန်ခံခဲ့သည်ကျောင်းသားများကို '' တနင်္ဂနွေသို့မဟုတ်တစ်နွေဦး preview ကိုအဖြစ်အပျက်ကဲ့သို့ On-ကျောင်းဝင်းအစီအစဉ်အတွင်းမှာ overnighting ပါသလား? စိတ်ဝင်စားသို့မဟုတ်သင်တစ်ကယ့်ကိုပျော်စရာအတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည်ကဲ့သို့တူညီသောကျောင်းကိုဝန်ခံပြီခဲ့သူသည်အခြားအထက်တန်းကျကွီးရှယျအိုမြားကိုသိရန်ရယူခြင်း။ တစ်နည်းအတွက်, သင့်အလားအလာအနာဂတ်အတန်းဖော် - ဒါဟာအလားတူအမှုအရာကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းနှင့်ဝင်လာသောလူတန်းစားရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်နယ်ပယ်မှထွက်လူတွေကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကြီးအခွင့်အလမ်းပါပဲ။ သငျသညျကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းမေးခွန်းများကို၏အစအဆုံးအကုန် run ပြီးပြီပြီးတာနဲ့ "သင်၏နာမကိုအမှီဘာလဲ?
မင်းဘယ်ကလာသလဲ? သငျသညျအဘယ်မှာရှိအခြားလျှောက်ထားခဲ့တာလဲ သငျသညျလေ့လာဖို့ဘာကိုလိုချင်တာလဲ? သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကဘာတွေလဲ? "သင်ပြန်ထိုင် chat, သင်၏နည်းနည်း-စဉ်အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ရန်နိုငျသညျ။ အဘယ်သူသည်ဒီတစ်ခါလည်းသင်ပြန်အတူတူပင်ကျောင်းဝင်းပေါ်တက်ကိုအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်နှစ်ခုစလုံး? သိတယ်စက်တင်ဘာလလာ, ပြီးတော့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
8. သင်ကအဲဒီမှာကိုယ်ရှိချင်တစ် သာ. ကောင်း၏ယောဘကိုလုပ်ပါနိုင်သလား
များစွာသောလူအဘို့, ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကောလိပ်ပညာရေးအစီအစဉ်များ, သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအခွင့်အလမ်းများ, ရပ်ရွာပံ့ပိုးမှု, တည်နေရာ, သူတို့ရှာနေကြောင်းလူမှုရေးမြင်ကွင်းတစ်ခုများ၏ပေါင်းစပ်ထားသည်ဖြစ်စေမဆိုလိုသည်မှာ fit မှဆင်းလာကောလိပ်ကိုသွားချင်တယ်ဘယ်မှာဆုံးဖြတ်ခြင်း။ ဤအ variable တွေကိုအချို့သည်ထွက်တွက်ဆရန်လွယ်ကူများမှာ - ရုံကောလိပ်ရဲ့ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျောင်းဝင်းခရီးစဉ် ယူ. သင်တစ်ဦးရေချိုးခန်းကောလိပ်ရဲ့ပညာရေးနှင့်လူနေအိမ်အစီအစဉ်များစာရင်း၎င်း၏တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များနှင့်၎င်း၏ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများတစ် catalog ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကို web surfing နှင့်ပင်ခရီးစဉ်ကိုယူပြီးသင်သည်သင်၏ပညာသင်နှစ်အကျိုးစီးပွားဧရိယာထဲမှာလူတန်းစားဆွေးနွေးမှုနှင့်တူ၏, ထိုသို့သင်အတွက်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူထွက်ဆွဲထားစံညဦးယံအချိန်သို့ fit သင်မည်သို့မပြောလတံ့သောအရာကိုထုတ်တွက်ဆမကူညီကြလိမ့်မည် အိပ်ဆောင်။ ကအားလုံးကို၏အောက်ခြေတွင်, တစ်ခုညအိပ်ခရီးစဉ်ကိုလုပ်နေတာ၏စစ်မှန်သောတန်ဖိုးကိုင်: သင်ပိုကောင်းတိကျစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်မှတပ်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာက, သင်စဉ်းစားနေတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းမှာတစ်ရက်-in-the-ဘဝတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ် အဲဒီမှာသင်၏အသက်တာ၏နောက်လေးနှစ်ဖြုန်း။
သင်ကနေ့ချင်းညချင်းအလည်အပတ်ခရီးမျှော်လင့်, သို့မဟုတ်ပါက dreading ခံရပေလိမ့်မည်။ အချို့သောကျောင်းသားများကသူတို့မိဘများကိုသူတို့မစဉ်းစားနေသောကောလိပ်မှာဒီအတွင်းဖွင့်ကြည့်ဘို့ထိုသူတို့ချွတ် drop မှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဖြစ်ခြင်းနေကြတယ်ထင်ပါတယ်။
နှောင်းပိုင်းတွင်ကံကြမ္မာအလည်အပတ်ခရီးနေ့၌နေ့လည်, သင်အဆင့်လက်ခံရေးရုံးမှာရောက်လာခြင်းနှင့်ဧညျ့ကွိုနှင့်အတူစစ်ဆေး, သင်၏ကျောင်းဝင်း tour guide နှင့်နေ့ချင်းညချင်းအိမ်ရှင်တွေ့ဆုံရန်။ သင့်ရဲ့အိမ်ရှင်ဖြစ်ကောင်းသင့်ထက်သာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အဟောင်းတွေဖြစ်တယ်။
သင်ကအဆင့်လက်ခံရေးရုံးထဲကလမ်းလျှောက်ကျောင်းဝင်းရန်နှင့်သင်တို့ရှေ့မှဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့ဖူးခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်မသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်အကြောင်းနည်းနည်း chat ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကျောင်းဝင်း၏ဗဟိုဖြတ်သန်းအဖြစ်သင့်အိမ်ရှင်ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦး bit နဲ့ဆော့ကစားပါလိမ့်မယ်။
သင်ကနေထိုင်ခန်းမမှာရောက်လာခြင်းနှင့်အခန်းအပေါ်ထပ်ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏အိတ်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ယခုသင့်အိမ်ရှင်နှင့်သင်၏ပထမဦးဆုံးအစစ်မှန်စကားပြောဆိုမှုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြစ်နိုင်သငျသညျညစာရှေ့တော်၌ထိုတက္ကသိုလ်နယ်မြေတစ်ခုအလွတ်သဘော, ကိုယ်ပိုင်ခရီးစဉ်ချင်ပါတယ်ဖြစ်စေမဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုသိရန်ရရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို, သင်ပျော်စရာအဘို့ပြုအမှုအရာ, သင်၏အထက်တန်းကျောင်းအများကြီးမျှော်လင့်ထား; သငျသညျမျှော်လင့်ငါ့ကိုသင်စဉ်းစားနေတဲ့ဒီကောလိပ်မှာငါ့အပညာသင်နှစ်, သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုနှင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံများအများကြီးမေးဖို့တာပေါ့။
ဤသည်ကိုသင်ပျော်စရာမေးခွန်းများသည်သင်၏အိမ်ရှင်မေးရန်အဘို့အကာလဖြစ်၏ (အဘယ်ကြောင့်သင်ဒီမှာကခစျြသလောသင့်ရဲ့ပထမနှစ်တွင်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမှတ်ဥာဏ်ကဘာလဲ?) ဒါပေမယ့်လည်းခက်ခဲသူတွေကို (ထိုအတန်းနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးတိုင်ကြားမှုကဘာလဲ? စာသားလူတိုင်းအရက်မူးရရှိပါသလား ဤနေရာတွင်တိုင်းသောကြာနေ့ညဥ့်? တကယ်တရားသူကြီး-y ကလူတွေဖြစ်ပါသလား) ။ သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားမေးမြန်းဖို့ကြောက်လန့်နေသောအရာတို့ကိုသင်၏အအိမ်ရှင်မေးကြည့်ပါ။
အဆိုပါညနေပိုင်း: အ All-In-ကောင်းမွန်သော-ပျော်စရာအပိုင်း
ညစာအချိန်ချဉ်းကပ်သကဲ့သို့သင်တို့ဖွယ်ရှိမကြာမီနေအိမ်သို့ခန်းမ၌သင်တို့၏အိမ်ရှင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖြည့်ဆည်းပါလိမ့်မယ်။ သင်ကောလိပ်ကျောင်းဘဝအစားအသောက်နှင့်အခြားတာမဟုတ်ကိုဗဟိုပြုလေ့လာသင်ယူရှိရာထမင်းစားခန်းခန်းမအားလုံးကိုတပ်တတပ်, လိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏အိမ်ရှင်နှင့်သူ၏သို့မဟုတ်သူမ၏မိတ်ဆွေများကနှင့်အတူစားပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်သူတို့၏အမည်များ, ဗိုလ်ကြီးနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့ကဒီကျောင်းကရှေးခယျြခဲ့ဘာဖြစ်လို့ကဲ့သို့သောအခြားကောလိပ်ကျောင်းသားအရေးပါသောအ stats သင်ယူနိုင်ပါတယ်။
ညစာအရေးယူအတွက်ကောလိပ်ကျောင်းအသိုင်းအဝိုင်းမြင်များစွာသောအခြားအုပ်စုများကိုစောငျ့ရှောကျတဲ့ Post-ညစာချက်တင်ဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကျောက်ပြားကိုလှည့်ပတ် lounging နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျမယ့်နှစ်ကဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်မှရန်သင့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အကြောင်းပြောဆိုအရာကို Listen; သူတို့တိုင်ကြားသည့်အခါနားထောင်ပါ။ သင်သည်သင်၏အတွင်းရှုထောင့်ငယ်ရာရာ၌ပုန်းအောင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Option ကိုတစ်ဦးက: သင့်အိမ်ရှင်အချို့လေ့လာမှုအချိန်လိုအပ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့်စာကြည့်တိုက် / ကျောင်းဝင်းဖီး / လေ့လာမှုအခန်းထဲမှာ / နေအိမ်သို့ခန်းမမှနည်းနည်းအဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့အခန်းတစ်ခန်းကိုသွားပါ။
Option ကို B ကို: တစ်စွမ်းဆောင်ရည်, အဖှဲ့အစညျးအစည်းအဝေး, ဟောပြောပွဲသို့မဟုတ်အခြားကျောင်းဝင်းဖြစ်ရပ်သွားပါ။
option ကို C: ထဲမှာနေနှင့်ထွက်ဆွဲထားဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအင်တာနက်အပေါ်ရီစရာရ။
Options ကို A, B, သို့မဟုတ် C ပြီးနောက်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးစက်နေတဲ့ရယူထားသောပူးတွဲလိုအပ်သောကောလိပ်မြို့မှာရေခဲမုန့်ရှိသွားပါ, လမ်းလျှောက်မြို့လယ်များအတွက်သွားပါ။ ထိုအခါသင်သည်, ပြန်လာသင့်ရဲ့လေကြောင်းမှေ့ရာစီစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားတိုက်, ညဉ့်အဘို့အတွက်လှည့်။
အဆိုပါနံနက်: အမလိုလား-tastic ပျော်စရာအပိုင်း
တစ်ဦးအခန်းဖော်နှင့်သင်၏လာမည့်နှစ်အတွက်အလေ့အကျင့်၌, သင်နှင့်သင့်အိမ်ရှင်, showering primping နှင့်အဝတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ညှိနှိုင်းရန်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးအမြန်နံနက်စာဖမ်းပြီးပြီးတော့လူတန်းစားဆီသို့ဦးတည်ပယ်ဦးမယ်။ သငျသညျသူသို့မဟုတ်သူမ၏ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားရန်သင့်အိမ်ရှင်နှင့်အတူသွားကြဖို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နံနက်လူတန်းစားရန်သင့်အားယူမှသူတို့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုအပေါ်တက်မိတ်ဆွေတယောက်ကိုသိမ်း ယူ. , ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ထွက်ဒဏ်ခတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပေမည်ကြပေမည်။
သင်ကိုယ်တိုင်ခြင်းဖြင့်လူတန်းစားမှသွားလျှင်, ကြိုတင်ပါမောက္ခမှကိုယ့်ကိုကိုယ်မိတ်ဆက်ပေးပါ။ သင်စိတ်ဝင်စားမယ့်ဘာသာရပ်ဧရိယာ၌တစ်ဦးကိုမှန်ကန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကောလိပ်ပါမောက္ခပြောပြရန်အခွင့်အလမ်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့ကကျပန်းအသစ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့အတန်းထဲတွင်သူသည်အံ့ဩခြင်းသို့မဟုတ်အဖြေဘို့သင်တို့အပေါ်မှာမခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
လူတန်းစားပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏အိမ်ရှင်အတူတက်တွေ့ပါမယ်နှင့်နေ့လယ်စာသွားပါ။ သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံး Hard-ရိုက်ပုတ်တဲ့မေးခွန်းများမေးလို့ရပါတယ်။ ထိုအခါသင်သည်အခန်းကနေသင့်ရဲ့အိတ်ကိုစုဆောင်းနှင့်အဆင့်လက်ခံရေးရုံးပြန်လမ်း၌ရှောက်သွားကြလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အိမ်ရှင်သင်သည်သင်၏နေထိုင်ပျော်မွေ့မျှော်လင့်ပါတယ်နှငျ့သငျဆိုပိုပြီးမေးခွန်းများကိုရှိပါကအီးမေးလျသို့မဟုတ်စာသားပေးပို့ဖို့သင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ကျောင်းပရဝုဏ်ခရီးစဉ်လမ်းညွှန်မေးပါ5မေးခွန်းများ
ဂြာမနျတွင်အဆိုပါတွေမှာ Passive Voice ကို
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်၏ Selected လက်နက်များ
Stag Moose (Cervalces Scotty)
အဆိုပါပုဒ်ဖြတ် Effect: အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာများ
ကလေးများကမ္ဘာမြေပေါ်မှာနေ့, Movies များနှင့်ရှိုးပွဲများ
ဂျူပီတာ 2022 မှစားပွဲတင် Sign - သင့်ကိုရှာပါ
အဘယ်ကြောင့် Planet ကိုမာကျူရီဒါအမှောင်လား?
Iliad စာအုပ် XXII ၏အကျဉ်းချုပ်
Hofstra တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
စန္ဒယားစာရွက်ဂီတ Read လုပ်နည်း
ဇီဝဗေဒမှ Related အဖြစ်အပူစွမ်းအင်သိပ္ပံဘာသာရပ်၏ဥပဒေများ
1929 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ
ချားလ်စ်ဒါဝင်နှင့် HMS Beagle သင်္ဘောသူ့ Voyages
1969 Ford ကား Mustang Model သည်တစ်နှစ်တာကိုယ်ရေးဖိုင်